Go'aankii maxkamadda EU ee qaybsiga saamiga qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Calanka EU iyo qaxooti ku xaniban xuduud. sawir: TT
Go'aankii maxkamadda EU ee qaybsiga saamiga qaxootiga
La daabacay onsdag 6 september 2017 kl 16.29
Waddammada Hungeeriya iyo Islofaakiya ayaa maanta ku guul-darreeystay dacwad ay hor geeyeen maxkamadda EU ee la xiriirtay qaybsiga saamiga qaxootiga ee waddammada EU.
Maxkamadda EU ayaa sheegtay in go’aankii saami qaybsiga qaxootigu ahaa mid cadaalad ku dhisan oo wax looga qabanayay xaaladdii cakirnayd ee qaxootiga sannadkii 2015 ee waddammada Griiga iyo Talyaaniga.
Maxkamadda EU ayaa diidmo kala hor timid abiil ey labada waddan ka qaateen go’aankii xilligii dayrta ee 2015 ee ahaa in 120 000 oo qaxooti ah kuna sugan waddammada Gariigga iyo Talyaaniga si siman loogu qeeybiyo waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ee EU. Iyadoona aanay maxkamaddu ayidin midna qodobbadii ey soo gudbiyeen labada waddan.
Labada waddan ee Hungeeriya iyo Islafaakiya ayaa ku andacooday in aan go’aanka loo dhammeeyn sida xeerku qabo, hase yeeshee ay maxkamaddu sheegtay inay ku filan aqlabiyadda waddammada oo isku raacay.
Waddammada Boolan iyo Jeekiya ayaa sidoo kale si xiisa leh ula socday dacwaddan, iyagoona qudhoodu ey ka soo hor jeedeen aqbalaadda saamiga qaxootiga, hase yeeshee iminka ku tala-qaadan doona, sida ay sheegtay Cecilia Wikström oo ah xil-dhibaanad baarlamanka EU u matasha xisbiga Liberalerna ee Sweden.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Islofaakiya Peter Ziga ayaa maanta sheegay mar uu u warramayay hayadda wararka ee Reuter in saami-qaybsigu aannu ahayn mid tallaabo horay loogu qaadi karo. Waana mid iminka looga fadhiyo EU sidii ay ku xallin lahayd.